Qalisa ubomi ukususela emva kokuqhawula umtshato
Ukwahlukana ... Leli gama liyatshisa yonke intokazi. Kodwa asimele siyeke, siphile. Njani ukwenza oku? Indlela yokuqala ubomi kunye ne-slate ecocekileyo emva komtshato?
Umtshato wokuqala uvela kuThixo, kwaye okwesibini uvela kobubi, "kusho ukuhlakanipha kwabantu abadala. Makhe sibone ukuba ulele? Mhlawumbi umtshato wesibini uya kuphumelela kakhulu?
Ngokokuqala ngqa, abafazi batshatile ngokusemncinci. Nangona sizama ukulingana nabantu baseMerika, okokuqala, bafumana imfundo, benze umsebenzi, baze bavelise intsapho ngo-30-35 ubudala, yonke into iyahluke ngathi. Amantombazana aseRussia abhinqa intsimbi yokubandakanya okokuqala ngqa kwiminyaka eyi-20-24. Izizathu zokwenza isisombululo esibalulekileyo zihluke: ezinye, ngendlela ephakamileyo kunye neemvakalelo ezilula, zifuna ukulungelelanisa ubudlelwane babo, kanti abanye bafuna ukumisela umntwana ongakazalwa. Kodwa ingxaki inzulu kakhulu. Inyaniso yokuba abantu abaselula abaqondi kakuhle ngokwalo lonke uxanduva lwezinto ezenzekayo. Intsapho ayibanga nje ngenyanga, ngumsebenzi omkhulu wokwakha ubudlelwane, ukufumana ingcamango kunye nokwamkela umntu kunye nayo yonke imilinganiselo yayo kunye neentlanzi. Umntu emva kweminyaka engama-20 ukuya ku-21 isele yenziwe njengomntu, kwaye akunakwenzeka ukulungisa ukuziphatha kwakhe. Kukho iindlela ezimbini: ukumkela umntu njengoko yena, okanye ukukhangela omnye ofuna. Ndikholelwe, okwesithathu ayinikiweyo, ukudweba into evela kumntu kuya kuba neendleko ezingaphezu kwakho kuzo zonke iziganeko. Ngokwezibalo, iRashiya ibe yinye yamazwe okuqala ngokwemiqathango yemitshato. KwiMoscow nganye isibini esitshatileyo isahlukanise. Izizathu ezibalulekileyo zokuqhawula umtshato: ukusetyenziswa kakubi kotywala, ukungabikho kwezindlu, izinga lempahla engaphantsi kunye nokungafani kwabantu.
Yiyintoni umfazi omele akwenze xa iseli yoluntu liye lahlukana, kwaye igama elithi "ukwahlukanisa" livele kwiinkcukacha zomntu?
Okokuqala, akukho nto unokuzigxeka ngayo, uzihlambalaze, uzibambe uze ufumane iziphoso. Ngoko uza kuphuhlisa i-neurasthenia okanye i-inferiority complex. Kubalulekile ukuvala zonke iintsebenzo zangaphambili kwi-castle, kwaye ushiye isitshixo ebhentshini epakini. Khumbula, ukuba uphile "apha kwaye ngoku" yimbewu yobulumko nolonwabo.
Ukwahlukana noxhatshazo, kwaye kuthatyathwa yimvakalelo emihle. Cinga ngezinto ongathanda ukuzenza - funda indlela yokudansa, ukuthunga, ukudibanisa, ukufunda iprogram entsha yekhomputha okanye ukulungiselela isitya esityebileyo. Kwaye mhlawumbi unomphefumlo omdala ongazange uphumele ukuya kwelinye ilizwe? Kuya kukuphazamisa ngokupheleleyo.
Kwakhona, bahlobo baLadies, musa ukulibala ngokubonakala kwakho. Yehla okanye uye kwi-cosmetian, i-masseur, yenza umquba. Yonke imihla, xhathisa umzimba wakho ngamabhafu kunye neoli efunekayo ye-orange - le nkqubo ivuselela ngokucacileyo kwaye iphucula imvakalelo. Bhalisela iklabhu yezempilo - oku akuyona nje indlela eya kumntu omncinane kunye nomntu ohlakaniphile, kodwa kunye nethuba lokwenza ulwazi olutsha.
Hamba ukuyothengisa, njengoko umhlobo wam uthi, "ukuthengwa kukuphefumlela!". Zithenge iingubo zamaphupha akho, kwaye awukwazi ukugqoka nje ...
Yonke imihla, zama ukubandakanya ukuzithuthukisa-akuthethi ukuba kufuneka usombulule iingxaki kwi-algebra, nanku umbuzo wokuphucula ngokomoya. Kufuneka ufunde ukuxolela abantu, ukuqonda ukuba abantu bayaphutha, bazilawula ekuboniseni iimvakalelo ezingekho phantsi, ukuthetha nabantu kwaye babone kuzo, ngaphezu kwazo zonke izinto ezintle.
Abaninzi abasetyhini emva kokuqhawula umtshato basenetyala kwaye, nokuba nenzondo ngabo bonke abantu besini, bakholelwa ukuba bonke abantu "babo," baza bazingqongeza "ngelokuba bafazi babuyele." Qonda, ukuba umntu omnye akagwebi sonke isiqingatha somntu, nje usibanjwe akusiyo indoda yakho. Khawucinge ngomntu onobuhle, kodwa ungaboni ubuso, kodwa cinga ngeempawu zobuntu ofuna ukuzibona kuye. Makhe abe nomusa, ngeendlela zokuhlekisa, ukudala, abathandekayo nabantwana abanothando. Ngalo msebenzi, uya kufaka entloko yakho imifanekiso yakho enhle yomntu. Ewe, inyaniso ayithathi ixesha elide.
Indlela yokuqala ubomi kunye ne-slate ecocekileyo emva komtshato? Kwezinye iimeko, xa umfazi oqhawulekileyo eshiywe ngumntwana okanye kubantwana ababini. Ngokuzithandela akafuni ukulungelelanisa ubomi bakhe bomi ngenxa yokwesaba impembelelo engalunganga yowatata okhulayo ekukhuliseni abantwana. Kwenzeka ukuba abantwana ngokwabo bacebise umama ukuba angahlangabezane namadoda "angaqhelekanga". Kumfazi, kufuneka aqonde apha ukuba umntu akayi kuzuza yonke iminqweno kunye neenkwenkwezi zomntwana womntwana, ukudala isithixo kuye, umnqule, udibanise "igobe" yakhe embi, ngaphandle koko omnye uya kuzisola. Sidinga ukufumana indlela kumntwana, uchaze loo mzekelo kuye, ngelixa ubonisa konke ukunyamekela komntwana kunye nothando. Chaza ukuba usapho olutsha luya kuphinda luzalwe, ukuba luyamthanda ngakumbi, kwaye uya kuba nolonwabo ngakumbi.
Abasetyhini bazibetha ngemibuzo malunga nokuba uyise omtsha uya kubathanda abantwana emtshatweni wabo wokuqala. Inyani le nto kukuba ukuba indoda ithanda umfazi, uya kuthanda abantwana. Ukuba unemizwa yangempela.
Emva kokubandakanyeka kwishishini lakho ozithandayo, ukufumanisa iitalente ezintsha, awuyi kuqaphela indlela okuyiyo inokunika ubungqina obutsha, obuvuthileyo kunye obudibeneyo apho uya kufumana inwaba elahlekileyo. Khumbula ukuba isigqibo sokuqala ubomi ukususela emva kokuqhawula umtshato kuxhomekeke kuwe! Inhlanhla!
Indlela yokuxelela umntwana ngomtshato
Yintoni ongayenza xa ungavumelani nomhlobo wakho
Inkukhu kunye neergetgettes
Imbali yabasetyhini bentente
Jam kwiipereyiti ngelamula
Xa Ubhaptizo lukaKristu lubhiyozelwa ngo-2017 - iimpawu kunye nezithethe zeholide yeholide. Xa ugebha kwindawo yeqhwa e-Epiphany, ixesha
Indlela yokujamelana nezikrakra kunye neziko
Indlela yokukhetha isetyenzi sombane
Iphupha lomfazi okhulelwe, umntwana ongakazalwa
Unyango lwe-osteoporosis ngamanqanaba abantu
UAnastasia Kochetkova noRezo - kutheni baqhawule?
12 abadumileyo, esasilahlekile ngo-2016
Inkwenkwezi Yonyaka omtsha: njani ukwenza inkwenkwezi enhle yephepha ngezandla zakho